Isku-shaandhaynta Senegal: Amadou Hott, AfDB ee Wasaaradda Dhaqaalaha - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Isku-shaandhaynta Senegal: Amadou Hott, AfDB oo ku taal Wasaaradda Dhaqaalaha - JeuneAfrique.com
Isku-shaandhaynta Senegal: Amadou Hott, AfDB oo Wasaaradda Dhaqaalaha - JeuneAfrique.com
Khabiirka Tani ee maaliyadda caalamiga ah ee 47 ayaa sii deynaya Wasaaradda Dhaqaalaha ee Senegal ee cusub, Qorsheynta iyo Iskaashiga. Waxa uu u baahan yahay in uu Macky Sall istaraatijiyad dhaqaale ah u sameeyo muusikada qayb ka mid ah PES Stage II.
Isku-shaandhaynta ayaa ka dhacay dawladda Macky Sall, April 7 u gaar ahaa saamaynta tageynaa ee Wasaaradda Dhaqaalaha, Maaliyadda iyo Qorshaynta laba maamul oo kala duwan, iyada oo kooxda ka mid ah Wasaaradda Maaliyadda iyo Miisaaniyadda , ayaa u sheegay Abdoulaye Daouda Diallo, Wasiirkii hore ee gaadiidka, iyo faylalka tacliimeed ee kale ee Dhaqaalaha, Qorshaynta iyo Iskaashiga, kaas oo loo doortay Amadou Hott.
Madaxweynaha ayaa haatan hore xigeenka ADB mas'uul ka ah tamarta, cimilada iyo kobcitaanka cagaaran tan 2016 sidaas daraaddeed qaadataa ka dib markii Amadou Ba, kaasoo ka tagay arrimaha dibadda, kuwaas oo madax tan 2014 waaxda oo dhan.
banker Investment arko manaafacaadsiga ka badan labaatan sano oo waayo aragnimo ee guud ahaan suuqyada maaliyadeed ee qaaradda, Europe, Maraykanka iyo Amadou Bariga Dhexe Hott dhaca macnaha dhaqaale oo ay ku calaamadsan fulinta marxaladda 2 ee qorshaha Senegal ee soo-saarka (PSE) iyo xoojinta nidaam kobcineed oo xiiso leh sannadihii la soo dhaafay, iyadoo celcelis ahaan sanadkiiba ay tahay 6%.
Diyaarad hore ee Dangote Capital
Inkasta oo ay jiraan natiijooyin macquul ah oo macquul ah, waa kan masuulka ka ah goobta lagu hayo muusikada dhaqaalaha ee Madaxweynaha Sall ee istaraatijiyadda dhaqaalaha uu yeelan doono caqabado culus oo wajihi doona: waa inuu hubiyaa in uu jiro maalgelin khaas ah, iyo ka mid noqoshada bulshada, oo burkii tobankii wax soo saarka, gaar ahaan shaqooyinka iyagoo sii wadanaya dibuhabaynta deegaanka ganacsiga ...
Maaddaama uu yahay xisaab wanaagsan - wuxuu ka qalinjabiyey xisaab dhaqaale oo ka yimid Jaamacadda New York iyo dhaqaalaha suuqa Paris - Sorbonne - ma wuxuu xallin doonaa isla'egyadan?
Wasiirka cusub wuxuu leeyahay deyntiisa, hay'addiisa, 2011, Afribridge Capital, shirkad maalgashi iyo shirkad saldhiggeedu yahay Dubai, oo bartilmaameed u ah qaarada Afrika. Afrikridge Capital wuxuu kula taliyaa kooxaha waaweyn ee Afrika, sida Shirkadda heysata shirkadda Nigerian Aliko Dangote. Gaar ahaan, wuxuu abuuray shirkadda maal-gashiga Dangote Capital, oo ah Amadou Hott inuu ku duulo.
Foosiska, khibrad isku dhafan
Intaa waxaa dheer in ay kugula talinayaan wadamada Afrika, kuwa ku nool Thiaroye-Gare, oo ku yaala bartamaha magaalada Dakar ee waaweyn, ayaa waxaa lagu sameeyay 2006 Shirkadda Maaliyadda ee Millennium, ka dib markii uu ku sugnaa Dubai, ka hor inta uusan labo sanno ka dib ku biirin, 2008, madaxa UBA Capital ee Lagos.
sano jir ah 47 iyo aabbihiis saddex, Amadou Hott sidoo kale waa dareen xoog leh oo ku saabsan kubada cagta, si saaxiibo uu naaneeso "Hottdona" ku tilmaamayaa in Halyeeyga kubada cagta Diego Maradona ee Argentina.
Waxa kale oo uu amrey, laga bilaabo Sebtembar 2013 ilaa Oktoobar 2016 Sanduuqa Hanti-dhowrka ee Maalgalinta Istiraatiijiga ah (Fonsis)ka dib markii ay mashruuca ka dhammeeyeen dhammaadkii si uu u dhammeeyo maalgashiga gaarka ah iyo latalinta maalgelinta Macky Sall. Sida laga soo xigtay ilo gaar ah oo la tashaday Dhallinyarada Afrikahaddii Fonsis ilaa hadda aysan soo saarin natiijooyinka laga filayo marka la soo saaro, sababtoo ah waligeed ma helin dhamaan khayraadka la ballanqaaday sababtoo ah rabitaan la'aanta qaar ka mid ah wareegyada maamulka. Gacmaha dagaalka, Amadou Hott lahaa ka tagay Fonsis ee AfDB.
Hadda in uu yahay mas'uul ka ah maamulka dhaqaalaha dalka, Amadou Hott, la odhan jiray "Young Hogaamiyaha Global" by 2012 World Economic Forum ee Davos, wuxuu ku siin doonaa ilaa xadka ay awooda?
Dhisidda warshadda cagta ee Lom Pangar / Théodore Nsangou: "dhammaan caqabadaha maaliyadeed ayaa la qaaday"